Golaha Qurbajoogta Puntland oo war saxaafadeed ka soo saaray eedihii Donald Payne. – Radio Daljir
Nofeembar 27, 2009 12:00 b 0
Minneapolis, Nov 27 – War saxaafadeed ka soo baxay Golaha Qurbajoogta Puntland ayaa lagu beeniyey qoraal todobaadkii hore ka soo baxay xafiiska Donald Payne, mudane ka tirsan Aqalka golaha wakiilada ee Maraykanka kaas oo lagu dhelleeceeyey dawlada iyo hoggaanka Puntland.
War saxaafadeedka ayaa lagu sheegay in Golaha Qurbajoogta Puntland uu aaminsan yahay in qoraalku uu ahaa mid aan laga fiirsan, deg deg lagu qoray, aanan u muuqan in uu ka tarjumayo dabeecada iyo waaya-aragnimada siyaasadeed ee lagu yiqiin mudanaha.
Qoraalka ayaa la sheegay in uu ahaa mid si cadaalada ka fog u dhaliilay dawlada Puntland.
Golaha Qurbajoogta Puntland ayaa sheegay in aanay aqbali karin dhaliilaha aan salka lahayn ee qoraalka mudanaha, maadaama aanu ahayn mid dhabta ku salaysan, waxna u dhimaya sumcada iyo magaca dawlada Puntland.
Goluhu waxaa uu sheegay in sida ay u xaqiijiyeen madaxda dawlada Puntland aanay jirin maxaabiis loo gacan galiyey Ethiopia, loona xaqiijiyey in hal maxbuus uu ku dhintay cisbitaalka isaga oo weli maxbuus ah.
“Dawlada waxaa ay noo xaqiijisay in maxaabiista kale sida ugu dhakhsaha badan maxkamad la soo taagi doono, lana sii dayn doono, haddii lagu waayo dambiyada lagu soo oogay” ayaa uu yiri qoraalku.
“Dadka Ogaadeen waa dad ay isir-wadaag yihiin dadka Puntland, sidii ay doonaanna ugu noolaan karaan Puntland, iyaga oo aan wax ciqaab ah loo gaysan” ayaa uu yiri war saxaafadeedku.
Goluhu waxaa uu tacsi u diray ehelada marxuumka dhintay.
Waxaa uu ugu baaqay dawlada Puntland in ay magdhaw ka bixiso geerida marxuumka, haddii lagu waayo dambiyada lagu soo oogay.
“Puntland hoy uma noqon karto jabhad, dambiilayaal, shufto baxsad ah, dad xag jir ah, ama argagixiso, mana noqon karto saldhig laga weeraro wadamada ay jaarka la tahaya iyo kuwa kale toona” ayaa uu yiri war saxaafadeedku.
Golaha Qurbajoogta Puntland ayaa sheegay in uu taageersan yahay syaasada dawlada Puntland ee nabada iyo amniga Puntland, uguna baaqay mudane Donald Payne iyo madaxda kale ee caalamku in ay garawsadaan xaalda qallafsan ee hortaal Puntland.
Golaha Qurbajoogta Puntland ayaa sidoo kale ugu baaqay dawlada Puntland in ay dhawrto xuquuqda dadka Ogaadeen ee ku sugan Puntland, ganacsi, dalxiis ama ha ku noolaadeene.
?Duqa magaalada Galkacyo oo aan waraysanay.
?Cismaan C. Boqorre, ku xigeenka afhayeenka baarlamaanka Somaliya oo aan waraysanay.